WONDERFUL UNIVERSE: ကျွန်တော်နဲ့သူမ
you make me feel like i don't remember myself !quick.. i can't wait to hear what u think of me
နယ်သားရေ နိပ်ဟ သူရဲကောင်းကြီး :)စာလာဖတ်တယ် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ နယ်ရေ .....:)ကောင်းသောနေ့ပါ :)
ဆရာမ ဂျူးရဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေလိုပါပဲလား၊ ဟမ်။
ဟီး။ ဆက်ရေးမယ်နော။ လောလောဆယ်တော့ ပွဲလေးတွေ ဆက်နေလို့ မူးလိုက်.. အဲလေ ပျောက်လိုက်အုံးမယ်လေ။
ဒီမှာ ပြန်လာ ပြီး ဆက်လိုက်တော့ ဆက်ထားမှန်း မသိဘူး။ပို့စ် အသစ်တင်မယ်လို့ ထင်ထားတာကျေးဇူးပါအကောင်းရေးပေးလို့တစ်ခုပဲအပြင်မှာ ၁ခေါက်ပဲ တွေ့ဖူးတာ။
အင်း၊ သုံးခေါက်မှတ်ထားတာ။ ကျွန်းရ။ သေချာ ပြန် စဉ်းစားတော့မှ နှစ်ခေါက်လေ။ ပထမဆုံးတစ်ခေါက်ရယ်၊ နောက်ပီး ကျွန်တော် ခရီးမထွက်ခင် နှုတ်ဆက်တဲ့ တစ်ခေါက်ရယ်။ နှစ်ခေါက်။ ပိုသွားတဲ့ တစ်ခေါက်ကတော့ အိပ်မက်ထင်ပါ့။ ကျွန်းရေ.. ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆိုးတွေပဲ မမြင်နေနဲ့။ လူသားပီသတာလို့ပဲ မှတ်ထား။ ကျွန်တော်က လူသားဆန်ရတာ ကြိုက်တယ်။ ဟန်ဆောင်ထားရတာတွေက ပင်ပန်းတယ်လေဗျာ။
မခ၊ နယ်သားရယ် ဆရာမရယ်၊ ဖတ်တယ် ပြောသွားလို့ကျေးဇူး။
ညက်ညောတဲ့ အရေးအသားနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိုက်တာ။
မယ်ကိုးရေ။ လာဖတ်တာကျေးဇူး။Tune, Hope we all know the value of friendship and we appreciate being the best for our friends. သူငယ်ချင်းဆိုလဲဟုတ်၊ အမဆိုလဲ ဟုတ်သော ဆိုတာလေးကို ထပ်ဖြည့် ပေးထားလိုက်မယ်ဗျာ။ နော.. ။ Don't woryy people will not confuse with something else, my sister. :-) PEACE
comment တစ်ချို့ ပြန်လာ ဖျက်သွားတယ်။အဲဒီအချိန်က စိတ်ထဲမှာ မကျေနပ်တာတွေ နည်းနည်းများနေတော့။နောက်တော့ တွေးမိတယ်။ကိုယ့်ကို ဘယ်သူက ဘာ ထင်မယ်ဆိုတာ ကိုယ် လုပ်လို့ရတဲ့ အရာမှ မဟုတ်တာလို့နော်။အားလုံးကို အရှူံးပေးထားပါတယ်။အနိုင်ပဲ ယူတော့မယ် :Pအလကား စတာပါ။ကိုယ့် အခြေအနေနဲ့ အနေအထားက တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကို defensive ဖြစ်စေဆဲပဲ ထင်ပါရဲ့။actually, i thank u for being my friend ပါ။
ကောင်းလိုက်တဲ့ အရေးအသားလေး။ စာလုံးမှိန်မှိန်တွေကိုတော့ မနည်းအားစိုက်ဖတ်လိုက်ရတယ်။နာ့ အကိုစွံမှန်းခုမှသိတယ်။
အားပေးသွားတယ် ..တိတ်တဆိတ် ဆုတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသူမ သိပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ် ..။
Is she same with blogger ma ma?just want to know if u don't mind